Wararka - Shirkadda Eni ee Talyaaniga waxay heshay awooda dabaysha ee Spain iyo 1.2GW
Iftiinka gidaarka cadceedda
Shirkadda Eni ee Talyaaniga waxay heshay awooda dabaysha ee Spain iyo 1.2GW
Shirkadda tamarta Talyaaniga ee Eni ayaa heshiis la gashay shirkadda Azora, oo ah shirkad madax bannaan oo ka shaqeysa maareynta guryaha, si ay uga iibsato Spain Gantaal la cusboonaysiin karo oo ah 1.2 GW.
Azora maalgashikeeda waxaa ka mid ah saddex beerood oo dabaysha ka shaqeeya, hal beero dabayl ah oo dhisme lagu wado (oo wadar ahaan wadartoodu tahay 230 MW dhexdooda) iyo shan baaxad weyn qoraxda mashaariicda korantada ee heerarka dambe ee horumarka, iyadoo wadar ahaan le'eg yahay 1GW. Hantidu waxay ku yaalliin Andalusia, Castile-La Mancha, Castile iyo Leon, Catalonia, Galicia iyo La Rioja.
Azora iyo Eni waxay sheegeen inay si wada jir ah u wada shaqeyn doonaan si loo hubiyo in shantaan mashruuc ee qoraxda ah la soo saaro wax soo saarka marka la gaaro 2024, waxayna intaa ku dareen inay ka shaqeynayaan heshiis istiraatiijiyad ballaadhan oo lagu sii wado ballaarinta Eni ee tamarta la cusboonaysiin karo ee Spain Suuqa ayaa soo galay suuqa Isbaanishka bishii Febraayo si uu uga iibsado mashruuca sawir qaadista 140 MW shirkadda X-Elio.
Santiago Olivares, oo ah bahwadaag mas'uulka ka ah maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Azora, ayaa faallo ka bixiyay: "Waxaan u adeegsan doonnaa diiwaankayaga raadinta in ka badan 20 sano ee arimahan si aan u taageerno qorshaha kobcinta ee Eni."
Qorshaheeda, Eni wuxuu sidoo kale rajeynayaa inuu horumariyo faylalka maalgashiga tamarta la cusboonaysiin karo ee Talyaaniga. Dhowr bilood ka hor, waxay ku dhawaaqday shirkad wadaag ah shirkadda Cassa Depositi e Prestiti Equity. Marka la gaaro 2025, shirkaddu waxay ku maalgelin doontaa qiyaastii 800 milyan oo euro qaybta tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee dalka. Labada shirkadood waxay qorsheynayaan inay dhisaan 1 GW oo ah mashaariicda tamarta qorraxda iyo dabaysha iyadoo la adeegsanayo hantida dowladda Talyaaniga.
Hangchi Technology waa shirkad dhameystiran oo loogu talagalay baytariga qoraxda , nidaamka qoraxda,qalabka qoraxda . Waxaan leenahay waayo-aragnimo taxane ah oo ah macaamiil dhexe iyo mid yar oo ka socda nidaamka qorraxda ee 1KW-100KW.
Waxaan rajeyneynaa inaan si dhakhso leh u heli doono baaritaankaaga.
Waqtiga dhejinta: Jul-29-2021